Du’aa Ka’umsa Lammataa (ዳግማይ ትንሣኤ)
Ayyaanni ka’umsa lammataa jedhamee kabajamu Gooftaan du’a moo’ee erga ka’ee booda gaafa guyyaa saddeettaffaadha. Dilbata (guyyaa Du’aa Ka’umsaa Gooftaa) irraa kaasnee hanga torban isa Dilbataatti guyyaa saddeet ta’a. Guyyaa kanattis Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos barattootni isaa hunda Toomaasiin dabalatee mana cufaa keessa osoo jiranii al lammaffaaf du’aa ka’uu isaa yeroo itti mul’isedha.
Yoh 20:24-30 irratti Gooftaan Keenya Iyyesuus Kiristoos yeroo jalqabaaf dhufee duuka bu’oota isaatti yeroo mul’atetti Yihuudaan erga bahee barattoota 11 keessaa tokko kan ta’e Diidimoos kan jedhan Toomaas isaan waliin hin jiru ture.Yeroo biraa Toomaas gaafa dhufu barattootni “Gooftaan du’aa ka’ee argine” ittiin jedhan. Toomaas garuu “mallattoo mismaaraan waraanamuu harka isaa osoo hin argiin,quba koos gara isa waraanamee osoo hin seensisiin ,harka koos gara cinaacha isaa eeboon waraanamee osoo hin seensisiin hin amanu” jedhe. Toomas duraan kan waamame warra Saduuqota keessaa ture. Isaan immoo yeroo hunda waa’ee du’aa ka’umsaa ni shakku. Kanaafuu, Toomaasis akkuma qomoowwansaa waan arge malee waan dhagahe amanuu hin dandeenye.
Guyyaa saddeettaffaa booda duuka bu’oonni Gooftaa Toomaasiin dabalatee mana cufatanii osoo jiranii Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos manni cufame sun osoo hin banamiin raajiidhaan gidduu isaaniitti argamuun “nagaan isiniif haa ta’u” jedhe . Sana boodas Toomaasiin “quba kee fidii harka koo waraaname ilaali. Harka kees gara cinaacha koo seensisi; amani malee shakkaa hin ta’iin” jedhe. Toomaasis gaafa harka isaa seensisu harki isaa akka kirrii abidda seentee gubachuun walitti suntuurte. Innis kana yommuu argu “Gooftaa koo,Waaqakoo” jedhe. Kan dhaga’e qofaan waan amanuu dadhabeef, abidda tuquudhaan Waaqummaa isaa mirkaneeffate jechuudha. Gooftaanis deebisee “ati waan na agarteef amante; warri hin argiin amanani eebbifamoo dha” jedhe.
Read more: Du’aa Ka’umsa Lammataa (ዳግማይ ትንሣኤ)
Read more: AKKA DUBBATE KA’EERA. Maat.28:6
Read more: Torbee gidiraa